Kernel 5.0 inosvika neimwe nhau uye rutsigiro rukuru | Linux Vakapindwa muropa
Kernel 5.0 inosvika neimwe nhau uye rutsigiro rukuru
Maawa mashoma apfuura Linus Torvalds, musiki, musimudziri uye mutungamiri weLinux Kernel chirongwa chekuvandudza, yazivisa kuburitswa zviri pamutemo kweshanduro nyowani inova Kernel 5.0 Zvakanaka, mushure memavhiki gumi eLinux Kernel 4.20, Linux Kernel 5.0 yapera.
Kuburitswa kweKernel 5.0 kwaitarisirwa kubva svondo rapfuura, asi paTorvalds sarudzo imwe vhiki yakawedzerwa kuyedzwa, sezvo ini ndaifunga zvakawandisa zvebug fixes zvanga zvashandiswa muvhiki yapfuura.
Iine dzinopfuura gumi nemazana masere neshanu shanduko uye akasiyana gadziriso, iyi nyowani vhezheni yeLinux Kernel 12,800 inotipa mitsva mitsva yekuwedzera Pakati pedu patinogona kuratidza kutsigirwa kweGeForce RTX muNouveau, iyo yakavhurwa sosi vhezheni yeNvidia madhiraivha, uye inotevera chizvarwa AMD processor, pamwe neAdiantum faira system encryption system
1 Kernel 5.0 ine rutsigiro rukuru rwehardware nevatongi
1.1 File mafaera
1.2 Yakawedzera rutsigiro rweARM zvishandiso
2 Dhawunirodha Kernel 5.0
Kernel 5.0 ine rutsigiro rukuru rwehardware nevatongi
Sezvambotaurwa kuburitswa kutsva kweKernel 5.0 inowedzera rutsigiro rwevamwe vatyairi senge AMDGPU iyo inowedzera rutsigiro rweFreeSync Iyo inokutendera iwe kugadzirisa iyo yekuzorodza mwero yeruzivo pane yekutarisa skrini kuti uone kushoma nguva yekupindura, kuburitsa zvinobuda, uye pasina zvinokanganisa panguva yemitambo uye vhidhiyo.
FreeSync zvakare inokutendera iwe kudzikisa kushandiswa kwesimba nekudzora kusimba kwekuzorodza kana mufananidzo uri pachiratidziri usingashanduki.
Uyewo, AMDGPU yakawedzera kugona kwekumisazve iyo GPU, iyo inosanganisira kutsigira kweCI, VI, uye SOC15 GPUs.
Uyewo, Mutyairi weNouveau anowedzera rutsigiro rwekutanga rweNVIDIA Turing TU104 uye TU106 GPUs (GeForce RTX 2000), kunyangwe ichiganhurirwa kune vhidhiyo modhi kudzora (simba manejimendi uye 2D / 3D mifananidzo yekumhanyisa haisati yaitwa).
Tsigiro yeDSC tekinoroji yakaitwa (Ratidza Rukova Kudzvanya), inotsanangurwa muVESA DP 1.4 kududzirwa uye inopa maturusi ekurasikirwa kwedatha compression kana uchichinjana ruzivo nezviratidziro zvinotsigira zvakakwirira resolution.
Intel DRM mutyairi akavandudza kuenderana neIcelake machipisi, pamwe nemutyairi we tegra weiyo Tegra186 uye Tegra194 machipisi ayo akawedzerawo rutsigiro rwekutumira odhiyo kuburikidza neHDMI.
Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuratidza kuti kuvhurwa kwe Kernel 5.0 inosvika pamwe nerutsigiro rweRaspberry Pi touchscreens.
Kernel 5.0 inowedzera kuiswa kwe binderFS pseudo faira system rutsigiro rweiyo Binder inogadziridza nzira yekutaurirana.
BinderFS inogonesa akawanda zviitiko zveiyo Android chikuva kumhanya munzvimbo imwechete nekubatanidza akasiyana Binder IPC mazita ezvinzvimbo kune akasiyana makomo mapoinzi.
Zvakare nerutsigiro rweAdiantum faira system encryption mu fscrypt yezvishoma-simba zvishandiso uye rutsigiro rwekuchinjanisa mafaera muBtrfs faira system iyo inogona kushandiswa mune yakaderera-magetsi zvishandiso izvo, nekuda kwekuwandisa kuwandisa, hazvigone kushandisa iyo AES block encryption algorithm
Iko shanduko kune iyo Ext4 uye XFS faira masisitimu anga akaganhurirwa kune optimizations uye kugadzirisa.
Yakawedzera rutsigiro rweARM zvishandiso
Iyo Linux Kernel 5.0 inowedzera nyowani yesimba-inoziva kuronga chiitiko chinotungamira kune iri nani simba manejimendi pane zvishandiso zvinoshandisa hombe ARM hombe.
Uye rutsigiro rweAPM mapuratifomu: Rockchip Gru Scarlet (Piritsi RK3188), Phicomm N1 (Amlogic S905D), Libretech S805-AC, Linksys EA6500 v2 Wi-Fi Router (BCM4708), Facebook Backpack-CMM BMC, Renesas iWave G20D-Q7 (RZ / G1N), Allwinner t3 -cqa3t-BV3 (T3 / R40), Lichee Pi Nano (F1C100s), Allwinner Emlid Neutis N5, Mapleboard MP130, Marvell Macchiatobin Single Shot (Armada 8040), i.MX mtrion EMCON-MX6, imx6ul-pico-pi, imx7d sdb-reva, i.MX7D PICO Hobbit, BQ Edison 2 QC, OrangePi Lite2, OrangePi 2G uye OrangePi i96.
Dhawunirodha Kernel 5.0
Iyi vhezheni itsva yeKernel 5.0 inowanikwa kurodha pasi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti kune avo vanofarira kuunganidza ivo vega.
Nguva Kune avo vanoda kumirira, inongova nyaya yemazuva pamberi pekusiyana kwakasiyana kweLinux kutanga kuita iyi vhezheni itsva uye govera izvo zvinovaka kune vashandisi vako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kernel 5.0 inosvika neimwe nhau uye rutsigiro rukuru